Maxay U Baahan Tahay Manchester City? Goorma Ayay Ku Guuleysanaysaa Horyaalka Premier League? - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMaxay U Baahan Tahay Manchester City? Goorma Ayay Ku Guuleysanaysaa Horyaalka Premier League?
Maxay U Baahan Tahay Manchester City? Goorma Ayay Ku Guuleysanaysaa Horyaalka Premier League?
April 26, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Manchester City ayaa hal tallaabo hore ugu qaadday hanashada horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League, xattaa iyadoo aan ciyaarin toddobaadkan, waxaana caawisay Leeds United oo laba dhibcood ka tuurtay Manchester United oo kaalinta labaad fadhida.
United ayaa barbarro goolal la’aan ah kusoo gashay Elland Road oo ay ugu tagtay Leeds, waxaanay taasi ka dhigan tahay in ay haysato 67 dhibcood iyadoo ciyaro ahaanna ay isku tiro yihiin Manchester City.
Iyadoo dhamaadka horyaalka shan ciyaarood ka hadhsan yihiin, Manchester City waxay hoggaanka ku haysaa 10 dhibcood oo nadiif ah, sidaas darteed, waxay u baahan tahay kaliya in ay guuleysato laba ciyaarood si ay ugu guuleysato horyaalka. Haddii ay Man United soo guuleysato kulamadeeda u hadhsan, City ayaa markaas u baahanaysa in ay badiso saddex ciyaarood oo ka mid ah shanta kulan ee u hadhay.
Dhibcaha ay Man City ka helayso kulamada u hadhay marka la isku-daro, waxay noqonayaan 15 dhibcood, waxaana sidaas oo kale ah Man United oo kusoo xigta. Haddii ay Sabtida ka badiyaan Crystal Palace oo ay duhurnimada Sabtida ugu tegayaan Selhurst Park, waxay hoggaankooda ka dhigi doonaan 13 dhibcood.
Manchester United oo ogsoon in City ay 13 dhibcood ka horreyso ayaa maalinta xigta oo noqonaysa Axadda toddobaadka dambe, waxay martigelin doontaa Liverpool oo iyaduna u baahan guul si ay sare ugu soo kacdo oo ay ugu soo dhowaato Chelsea oo kaalinta afraad fadhida. Haddii United ay soo garaacdo Liverpool, waxa wali sii noolaanaya tartanka horyaalka.
Haddii Manchester United iyo Liverpool ay barbarro ku dhamaystaan, City ayaa u baahan doonta hal dhibic oo kale si ay ugu dabbaal-degto horyaalka, laakiin haddii ay Liverpool badiso, si rasmi ah ayay Manchester City u noqon doontaa hoggaanka horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan 2020/21, waxaanay dabbaal-degi doonaan Axadda soo socota iyagoo guryahooda jooga oo kaliya fiirsanaya natiijada Man United iyo Liverpool.
Xaaladda kale ee dhici karaysaa waxay tahay, haddii City ay soo garaacdo Crystal Palace, Man United na ay soo garaacdo Liverpool, waxay City la ciyaari doontaa Chelsea May 8, waxaana haddii ay xataa guul-darraysato ay qaadi kartaa horyaalka balse waxay haddana ku xidhnaan doonaan natiijada ay la timaaddo Manchester United.
Sidaa darteed, Manchester City ayaa u baahan in ay ka badiso Crystal Palace iyo in Liverpool ay garaacdo Manchester United.